OTU ESI EDOZI NETWỌK NETWỌK NA WINDOWS 10 - WINDOWS - 2019
Ịmepụta netwọk n'ụlọ na Windows 10
LAN LAN bụ ngwá ọrụ dị mfe nke ị ga - eji mee ka ọrụ dị mfe nke ịnyefe faịlụ, na - eri na ịmepụta ọdịnaya. Nke a na-etinye aka na usoro nke ịmepụta ụlọ "lokalki" dabere na kọmputa na-agba Windows 10.
Ọnọdụ nke ịmepụta netwọk ụlọ
Usoro maka ịmepụta netwọk n'ụlọ na-arụ na nkebi, malite na ntinye nke otu ụlọ ọhụrụ na-agwụ site na ịmepụta ohere ịnweta nchekwa onye ọ bụla.
Nkeji 1: Ịmepụta otu ụlọ ọrụ
Ịmepụta HomeGroup ọhụrụ bụ akụkụ kachasị mkpa nke ntụziaka ahụ. Anyị enyochala usoro okike a n'ụzọ zuru ezu, ya mere soro ntuziaka na isiokwu ahụ na njikọ dị n'okpuru ebe a.
Ihe ọmụmụ: Ịtọlite ​​netwọk mpaghara na Windows 10 (1803 na elu)
A ghaghị ime ọrụ a na kọmputa niile nke a chọrọ iji mee ihe n'otu netwọk ahụ. Ọ bụrụ n'etiti ha enwere ụgbọala na-agba ọsọ na G7, ntuziaka na-esonụ ga-enyere gị aka.
More: Ijikọta na otu òkè na Windows 7
Anyị na-ahụkwa otu ihe dị mkpa. Microsoft na-arụ ọrụ mgbe niile iji meziwanye Windows ọhụrụ, ya mere, mgbe mgbe ọ na-enweta mmelite, gbanwee ụfọdụ menus na windo. N'ime oge nke ederede ederede nke "ọtụtụ" (1809), usoro maka ịmepụta otu ọrụ dịka akọwapụtara n'elu, ebe na nsụgharị n'okpuru 1803 ihe niile na-eme dị iche iche. Na saịtị anyị, akwụkwọ ntuziaka dị mma maka ndị ọrụ dị iche iche nke Windows 10, ma anyị ka nwere ike ikwu na imelite ozugbo enwere ike.
Gụkwuo: Ịmepụta otu ụlọ ọrụ na Windows 10 (1709 na n'okpuru)
Nkeji 2: Ịhazi kọmputa site na kọmputa
Otu ụzọ dị mkpa nke usoro a kọwara bụ nhazi nke nchọpụta netwọk na ngwaọrụ niile n'ime ụlọ.
Meghee "Ogwe njikwa" n'ụzọ ọ bụla - dịka ọmụmaatụ, chọpụta ya "Chọọ".
Mgbe ị na-ekpughere window windo ahụ, họrọ otu ụdị. "Netwọk na Ịntanetị".
Họrọ ihe "Network and Sharing Center".
Na menu na aka ekpe pịa njikọ. "Gbanwee nhọrọ ịkekọrịta dị elu".
Akọrọ ihe "Kwado Nchọpụta Mgbasaozi" ma "Kwado Njikwa na Mbipụta Ịkekọrịta" na nke ọ bụla na profaịlụ dịnụ.
Hụkwa na nhọrọ ahụ nọ n'ọrụ. "Ịkekọrịta nchekwa nchekwa ọha"dị na ngọngọ "Netwọk niile".
Ọzọ, ịkwesịrị ịhazi ohere na-enweghị paswọọdụ - maka ọtụtụ ngwaọrụ nke a dị oke egwu, ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọ megidere nchekwa.
Zọpụta ntọala wee malitegharịa igwe.
Nkeji 3: Na-enye ohere ịnweta faịlụ na nchekwa ọ bụla
Oge ikpeazụ nke usoro a kọwara bụ mmalite nke ịnweta akwụkwọ ndekọ ụfọdụ na kọmputa. Nke a bụ ọrụ dị mfe, nke na-adabere na omume ndị a kpọtụrụ aha n'elu.
Ihe Ọmụmụ: Ịkekọrịta nchekwa na Windows 10
Ịmepụta netwọk ụlọ na-adabere na kọmputa na-agba ọsọ Windows 10 bụ ọrụ dị mfe, karịsịa maka onye nwere ahụmahụ.